Tekkatho Moe War (5) – HlaMin
Tekkatho Moe War
Tekkatho Moe War (5)
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 29, 2021 • ( Leaveacomment )
Update : December 28, 2021
ယူနက်စ်ကို ၏ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ် ခံရသော ပုဂံမြေ….​” ပုဂံ အမွေ ” ကဗျာကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုခံစားစေရန် နှင့် အမေရိကားမှ ဦးလှမင်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ လှပစွာပြန်ဆိုထားခြင်းကိုလည်း အရသာခံဖတ်ရှုစေလိုသည့် စေတနာအရင်းခံစိတ် တို့ကြောင့် ပြန်လည်တင်ပြရခြင်း ဖြစ်…။
သည်နေ့ ၁၉-၁ဝ-၂ဝ၂ဝ ထုတ် Weekly Eleven တွင် ပါသော စာရေးသူ၏ဆောင်းပါး…..
“ရသ အားလျော့သွားတတ်သော ဘာသာပြန်ဆိုမှု”
ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောရပါက စာရေးသူသည် ဘာသာပြန်သည့်အလုပ်ကို အနည်းအကျဉ်းသာလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ များသောအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသိပ္ပံပညာတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာဘာ သာသို့ ပြန်ဆိုရေး သားခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာမှအင်္ဂလိပ်သို့ ပြန်ဆိုခြင်းကိုမူ တစ်ခါတစ်ရံသာလုပ်ဖူးသည်ဟု ဝန်ခံရပေမည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက် သတ္တတစ်ပတ် ခန့်က ရသကဗျာစာပေနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးရန် တာစူခဲ့သော်လည်းမရေးဖြစ်ခဲ့ဘဲ အာရုံထွေပြားကာ အခြားအကြောင်းခြင်းရာ တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ယခုတော့ အာရုံသည် ဘာသာပြန်စာပေကိစ္စသို့ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်လာပြီ။ ကိုဗစ်ဟူသော ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုသည်သာ လူအများ၏ အတွေးဦးနှောက်ထဲ ကိန်းအောင်းနေချိန်၌ စိတ်နှလုံးအား အထိုက်အ လျောက်အေးငြိမ်းစေမည့် စာပေကဗျာကိစ္စ၊ အလင်္ကာ ရသကိစ္စ တို့ကိုရေးးသားတင်ပြလျှင် သင့်တော်လိမ့်မည်ဟု တွေးဆ မိသည်။ ဘာသာပြန်အလုပ်သည် အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ရှေးကတည်းက အသိအမှတ်ပြုလက် ခံခဲ့ ကြကြောင်း မှတ်သားဖူးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို ပရိုဖက်ရှင် (Profession) ဟုခေါ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဟု လူအားလုံးလိုလိုပင် သုံးနှုန်းနေကြပြီ။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် ဘာသာပြန်သည့်အလုပ်မှာ လွယ်ကူသည့်အလုပ်မဟုတ်ပေ။ တစ်ဘာသာမှတစ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရာတွင် ရှောင်လွှဲမရသောအခက်အခဲများစွာ ရှိစမြဲဖြစ်သဖြင့် ပြန်ဆိုမှုအနေအ ထားအရ စာလုံးတစ်လုံးကို တစ်လုံးချင်း အသေထားပြန်ဆို၍မရနိုင်သည်ကို တွေ့ရမည်။ ဘာသာပြန်ဆိုမှုပြု လုပ်သူအချို့သည် စကားလုံးတစ်လုံးအား အသေထား၍ ပြန်ဆိုနိုင်သည်ဟု အထင်ရောက်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး exploit ကိုကြည့်လျှင် ယင်း၌ကောင်း သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသကဲ့သို့ မကောင်း သောအဓိပ္ပာယ်လည်း ဆောင်သည်။ exploit ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခေါင်းပုံဖြတ်သည် ဟု မျက်စိထဲ၌ တန်းခနဲမြင်ယောင်သည်၊ တခြားမည်သည်ကိုမျှ မစဉ်းစားတော့…။ ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်သ မားခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူသည် သူ၏ လက်အောက်အလုပ်သမားတို့အား ပေးရမည့် လုပ်ခကို အကုန်ရှင်းမပေးဘဲအချို့အား ဖြတ်ယူထားခြင်းသည်လည်း exploit လုပ်သည်ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် exploit တွင် အခြားအဓိပ္ပာယ်များလည်းရှိသေးသည်။ ဥပမာ exploit one’s opportunities မှာ အခွင့်အလမ်းများအားမိမိက ကောင်း စွာ အသုံးချခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဆောင်းပါးအတွက် နေရာအခက်အခဲဖြစ်သောကြောင့် နမူနာစကား လုံးအချို့ကိုသာ တင်ပြနိုင်မည်။ ဆင်တူယိုးမှား စကားလုံး နှစ်လုံးအဖြစ် self နှင့် ego ကိုသုံးသပ်ကြည့်လျှင်မြန်မာသို့ဘာသာပြန်ရန်အတော်ပင် အခက်အခဲတွေ့ရမည်။ ပုဂ္ဂလ ဟုပြန် မည်လား၊ အတ္တ ဟုပြန်မည်လား၊ ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း ၅ဝ မကရှိသော စာရေးဆရာတစ်ယောက်က မိန့်ဆို ပါသည်။ (ကိုးကား-ဆရာကြီးသခင်ဘသောင်း၏ “ဘာသာပြန်သူတစ်ဦး၏အတွေ့အကြုံနှင့်ထင်မြင်ချက်များ” စာတန်း)။ သို့ဖြစ်၍ စာစုတစ်ခုအား ဘာသာပြန်ရာ၌ ထိုစာစုတွင်ပါသော အချို့အချက်အလက်များကို ချန်လှပ်၍မထား သင့်။ မပါသော အချက်အလက်ချားကိုလည်း အပိုထည့်၍ပြန်ဆိုခြင်း မပြုသင့် ဟု ထင်မြင်မိသည်။ နုတ်ပယ်၊ဖြည့်စွက်ထားသည့် ဘာသာပြန် ရေးသားချက်တစ်ရပ်ကို ဘာသာပြန်ဟုမပြောသင့်ကြောင်း မှတ်ချက်ချရပေ မည်။ ထို့ပြင် တိတိကျကျ တိုတိုတုတ်တုတ် ရေးသားဖော်ပြထားသည့် စာစုတစ်ခုကို ပိုမိုဖတ်ရှုကောင်းစေရန်စကားတို့ဖြင့် အစားထိုးကာ ရှည်လျားစွာ ပြန်ဆိုခြင်းသည် လည်း မူရင်းအပိုဒ်၏အာဘော် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ကြောင်း ဆရာကြီးများက သတိပေးခဲ့သည်။ အဓိကအကျဆုံးတစ်ခုမှာ ဘာသာပြန်ဆိုသူများအတွက် အဘိဓာန်များ၊ ကိုးကားရည်ညွှန်းကျမ်းများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေရန်လိုအပ်သည့် အချက်ဖြစ်သည်။
အထက်တွင် ရေးသားခဲ့သည့် ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ကြုံရတတ်သော အခက်အခဲများအား နမူနာအနည်း ငယ် သုံးလျက် အလွန့်အလွန်အကျဉ်းမျှသာ ဖော်ပြပေးထားသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ တကယ်တမ်း နမူနာများစွာအသုံးပြုလျက် အခက်အခဲများကို လေ့လာသုံးသပ်မည်ဆိုပါက ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပေမည်။ ဤ ဆောင်းပါးရေးခြင်း၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ ဘာသာပြန်ကဗျာကိစ္စကိုသာ အကျဉ်းတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ မြန်မာကဗျာမှ အင်္ဂလိပ်သို့ပြန်ဆိုရာ၌ အင်္ဂလိပ်စကားပြေ သို့ဖြစ်စေ၊ အင်္ဂလိပ်ကဗျာသို့ဖြစ်စေ ဘာသာပြန်နိုင်သည်။ မြန်မာကဗျာမှ အင်္ဂလိပ်ကဗျာသို့ ပြန်ဆိုသည့် လုပ်ငန်းတွင် မြန်မာ မဟုတ်သောစာဖတ်သူတစ်ဦးကယင်း က ဗျာ ကိုပင် မြန်မာတစ်ဦးကဖတ်၍ခံစားရသည့်အတိုင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားဖြင့် နားလည်ခံစားနိုင်အောင် ပြု လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့၌ မြန်မာကဗျာဖတ်သူ၏အာရုံတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ခံစားချက်များ အတိုင်း အင်္ဂလိပ်ကဗျာဖတ်သူတစ် ဦး က သူ၏အာရုံ၌ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားချက်မျိုးပေါ်လာစေရန် ဘာသာပြန်နိုင်မည် မဟုတ် ပေ။ မြန်မာကဗျာ သည် မြန်မာကဗျာဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ်ကဗျာမဟုတ်သောကြောင့် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ တိကျစွာပြန်ဆိုနိုင်ရန်ဟူ သော လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝမည်မဟုတ်။ မြန်မာကဗျာဖတ်ရှုသူ မြန်မာအချင်းချင်းပင်လျှင် ထိုကဗျာမှရရှိသည့် ခံစားချက် တူညီ မည်မဟုတ်။ ယင်းသို့ဆိုသဖြင့် မြန်မာကဗျာကို အင်္ဂလိပ်သို့ပြန်ဆိုရန်မဖြစ်တော့ဟု အားလျှော့ပစ်ရန်မဟုတ်။ မြန်မာစာနှင့် ဝါကျ တည်ဆောက်ပုံမှာ အင်္ဂလိပ်ဝါကျပုံစံနှင့်မတူ၊ တစ်နည်းပြောရလျှင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်ဟု ပြောရမည်။ မြန်မာသဒ္ဒါတွင် ကြိယာသည် ဝါကျတစ်ခု၏နောက်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်ကမူ ကြိယာက ဝါကျအလယ်လောက်တွင်တည်ရှိသည်။ မြန်မာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို မူရင်းအတိုင်းဖတ်ရှုပြီး ယင်းကဗျာကိုဘာသာပြန်ထားသည့် အင်္ဂလ်ိပ်ကဗျာအားဖတ်ရှုသော် အတွေးရလဒ် တစ်ခုတည်းကို နှစ်ပုဒ်စလုံးကဖော်ပြသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ခံစားမှုနှင့် ခံစားမှုအစဉ်ချင်းမတူသောကြောင့် အရသာပေါ်ပုံချင်းမတူပေ။ ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေ၏ “မြန်မာကဗျာမှအင်္ဂလိပ်ကဗျာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း” ဆောင်းပါးကိုရည် ညွှန်းကိုးကား ရပါက အောက်ပါမြန်မာကဗျာကို ဆရာကြီးကထုတ်နုတ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။
မရွာဘဲ မဲ(မည်း) ပါနဲ့ ရွှေမိုးညို
Do not darken without pouring,
oh! overcast skies.
You loom and lour
to constrict the home-dweller.
Even as though about to pour,
you should not thunder
from above Myedu Town in the north.
အထက်ဖော်ပြပါဘာသာပြန်ကဗျာကိုကြည့်လျှင် မြန်မာကဗျာနောက်ဆုံးစာကြောင်းဖြစ်သော “ချုန်းသင့် ပါဘူး” မှာ ကဗျာ၏ အထွဋ်အထိပ်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပေသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွင်ရှိသောဖွဲ့ပုံစနစ်မတူသောကြောင့် ဝါကျအားလုံး၏ အလယ် ပိုင်းအောက်နားသို့ ရောက်သွားရာ ခံစားရမည့်ရသသည် ယုတ်လျော့အားပျော့သွားလေတော့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသော စာရေးသူ၏မိတ်ဆွေ၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ ဘီအီး လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ ဦးလှမင်း က စာရေးသူ၏ “ပုဂံအမွေ” ကဗျာအား အင်္ဂလိပ်သို့ ပြန်ဆိုပေးခဲ့ သည်။ သူသည်ငယ်စဉ် ကျောင်း သား ဘဝကတည်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်သည့် ဂါးဒီးယန်းကဲ့သို့သောသတင်းစာ မဂ္ဂဇင်းတို့တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားဖြင့် ကဗျာအများအပြားရေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ “ပုဂံအမွေ” ကဗျာကို မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ယှဉ်တွဲ၍ ရသခံစား ကြည့်ပါက ဆရာ့ဆရာကြီးများ မိန့်မြွက်ခဲ့သည့်အတိုင်း မူရင်းထက် ရသ အားနည်းသွားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ယူနက်စ်ကိုမှ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် ပုဂံမြေအတွက်ရေးသော မှတ်တမ်းကဗျာဖြစ်သည်။
“ ပုဂံ ‌အ မွေ “
ထိရှလွမ်းမော၊ တဝေါဝေါ စီးဆင်း
မြစ်မင်း ဧရာဝတီ၊ ဝန်းလည်ရစ်ခွေ
နှလုံးသား ကြွေကျ၊ အန ဂ္ဃချစ်ခြင်း
ပန်းပု ဗိသုကာ၊ လက်ရာထောင်သောင်း
ကမ္ဘာကုန်တည်သရွေ့၊ ကြည်မွေ့ နှစ်လို
ကြည်ညို ဝပ်တွား၊ ပျောက်ပျက်မသွားဖို့
တက္ကသိုလ် မိုးဝါ (၇-၇-၂ဝ၁၉)
Heritage of BAGAN
By HLA MIN
Rapid, incessant heartbeat
racing towards the Bagan area
Deeply rooted in the bottom of my heart
the cultural, religious, historical and
architectural heritage of Bagan.
Fascinating, full of wonder and memories,
heart-rendering sublime Bagan
finally, rightfully inscribed as World Heritage Site
O… ancient Temple City
where I left my heart.
Every time one looks yonder
touched by the whirling, swirling, vibrant
Ayeyarwaddy (Lord of the rivers)
Misty, dreamy panoramic view
O…. my dear Ayeyarwaddy.
Treasure of sculpture
Countless shrines and pagodas of Bagan
to be revered, cherished and appreciated
O…. glorious Bagan.
ရေးသူ– တက္ကသိုလ် မိုးဝါ
Categories: Tekkatho Moe War
Tekkatho Moe War (6)
Tekkatho Moe War (4)